July 10, 2019 - ThutaSone
လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေလား ရွတ်ဆိုသင့်သော အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့်ဂါထာတော်….
July 10, 2019 ThutaSone 0
လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေလား ရွတ်ဆိုသင့်သော အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့်ဂါထာတော်…. အကြွေးဆပ်စရာရှိနေတာလား? အကြွေးတွေမရပဲဖြစ်နေတာလား? ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလား? ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေရတာလား? သောကများနေရတာလား? ဤဂါထာကို ရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင် အဓိဌာန်တင်ပြီး ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ရပါမယ် တစ်နေ့ကို ၂၄ခေါက်ရွတ်ဆိုရပါမယ်။၂၄ရက်တိတိ နေရာမှန် အချိန်မှန်ရွတ်ဆိုရပါမယ်။ မိမိ မွေးနေ့ကစတင်ပြီး ရွတ်ဆိုရပါမယ် ထိုရွတ်ဖတ် […]
ချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရေများ တက်လာနိုင်ဟု ဦးထွန်းလွင် သတိပေး
ချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရေများ တက်လာနိုင်ဟု ဦးထွန်းလွင် သတိပေး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၀)ရက်မှ(၁၆)ရက်နေ့အထိ ရက်တစ်ပတ်အတ ွင်း ရာသီ အ ခြေ အ နေ မုတ်သုံအားပြတ်၍ ချင်း တ ွင်း မြစ် နဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရေများ တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ၁၀-၇-၂၀၁၉ […]
တိုက်ခန်းတွေသဘင်လောကသားများအတွက် ဆောက်လုပ်ပေးနေတဲ့ မင်းသား ဖိုးချစ်
တိုက်ခန်းတွေသဘင်လောကသားများအတွက် ဆောက်လုပ်ပေးနေတဲ့ မင်းသား ဖိုးချစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ နေထိုင်တဲ့ သဘင်အနုပညာရှင်များ နေစရာအတွက် အခက်အခဲမရှိ အဆင်ပြေနိုင်ဖို့အတွက် သဘင်အဖွဲ ့အစည်း ဥက္ကဋ္ဌ ဖိုးချစ်က ရန်ကုန်တိုုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာ သဘင်အိမ်ရာ စီမံကိန်းကြီးကို အကောင်ထည်ဖော်နေပြီး မကြာခင်မှာ သဘင်လောကသားများ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ […]
Victoria အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရန် စွပ်စွဲချက်များ၊ ဆူပူ ဆန္ဒပြစေရန် လှုံ့ဆော်မှုအရေးအသားများ ပြုလုပ်ပါက အရေးယူသွားမည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကြေညာ
Victoria အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရန် စွပ်စွဲချက်များ၊ ဆူပူ ဆန္ဒပြစေရန် လှုံ့ဆော်မှုအရေးအသားများ ပြုလုပ်ပါက အရေးယူသွားမည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကြေညာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် Victoria အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးစာပြန်ကြားချက်၊ CCTV မှတ်တမ်း၊ ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ မေးမြန်းစစ်ဆေးထားသူများ၏ သက်သေခံ ထွက်ဆိုချက်များ အပါအဝင် အခြားအခြားသောအထောက်အထားများဖြင့် […]
ကမ္ဘာ့အဆင့် ၈၄ ထိတက်လာတဲ့ မြန်မာကြက်တောင်ရိုက် အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ
ကမ္ဘာ့အဆင့် ၈၄ ထိတက်လာတဲ့ မြန်မာကြက်တောင်ရိုက် အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ မြန်မာကြက်တောင်ရိုက် အားကစားမယ် မသက်ထားသူဇာဟာ ကမ္ဘာ့ကြက်တောင်ရိုက် အဖွဲ့ချုပ်က မနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ အဆင့် ၈၄ အထိ တက်လာပါတယ်။၂၀၂၀ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ မသက်ထားသူဇာဟာ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်က အိုင်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံမှာ […]
စတိုးဆိုင်ဝန်ထမ်း မိန်းကလေးအား ဆိုင်ရှင်လင်မယားမှ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်
စတိုးဆိုင်ဝန်ထမ်း မိန်းကလေးအား ဆိုင်ရှင်လင်မယားမှ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့နေ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် စတိုးဆိုင်ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးငယ်တဦး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့် လက်ပြင်မှာ အနာဖြစ်ပြီး မုံရွာကုတင် ၅၀၀ ဆံ့ဆေးရုံကြီးမှာ ခွဲစိပ်ကုသမှု ခံယူခဲ့ရပါတယ်။ လက်ရှိ ဆေးရုံမှာ အတွင်းလူနာအဖြစ် တက်ရောက် ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ မရွှေရည်သိန်းဟာ […]
ရဲတပ်ဖွဲ့ကသက္ကမိုးညိုကို အမှုဖွင့်ရသည့်အကြောင်းအရင်း ရှင်းလင်
ရဲတပ်ဖွဲ့ကသက္ကမိုးညိုကို အမှုဖွင့်ရသည့်အကြောင်းအရင်း ရှင်းလင် နေပြည်တော်က ဗစ်တိုးရီးယားဟု အမည်ပေးထားသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရသည့် မိန်းကလေးငယ် အမှုကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် သက္ကမိုးညို အကောင့်ပိုင်ရှင် ကို ပျဉ်းမနားရဲစခန်းမှ အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄(ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးပြီးနောက် ကျပ်သိန်း (၁၀၀)အာမခံ ပေးခဲ့သည်။ သက္ကမိုးညို အကောင့်ပိုင်ရှင် ကျန်းမာရေးနှင့် […]
ကျမနုပျိုလှပခဲ့ စဉ်တုန်းက ကျမထက် ၁ဝနှစ်လောက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျ ခဲ့တာ ဆရာ အသိပါ_
ဆရာ_ကျမနုပျိုလှပခဲ့ စဉ်တုန်းက ကျမထက် ၁ဝနှစ်လောက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျ ခဲ့တာ ဆရာ အသိပါ___။ အိမ်ထောင်ကျခါစ တုန်းက ကျမ အမျိုးသားဟာ အင်မတန် အားကိုးထိုက်တဲ့သူလို့ခံစား ခဲ့ရတယ် ။ ကျမ သူ့ အပေါ်အထင်တကြီးနဲ့အားကိုးချစ်ခင် ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့_______ နှစ်တွေကြာမြင့် ပြောင်းလဲ […]
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုအတွက်တရားခံအမှန် မဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီတိုင်းပြည်ကနေ စွန့်ခွာဖို့ စဉ်းစားကြပါ ဆိုတဲ့ ဟန်ထူးလွင် ဇနီး
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုအတွက်တရားခံအမှန် မဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီတိုင်းပြည်ကနေ စွန့်ခွာဖို့ စဉ်းစားကြပါ ဆိုတဲ့ ဟန်ထူးလွင် ဇနီး အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင်က နေပြည်တော်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုအတွက် သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားတို့ မိသားစုကို တက်နိုင်သလောက် ကူညီပေးချင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် ။ ကလေးတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကိုလည်း စိတ်ပူတယ်လို့ ပြောပါတယ် ။ […]
အသက်တစ်ချောင်းတော့ ဆုံးရှုံးသွားပြန်ပါပြီ…ပြည်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာတဲ့…
ပြည်ဆေးရုံကြီးကတော့ နဲနဲများသွားပြီ ပြည်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ဒီနေ့ နှစ်နာရီခန့်က ပေါ့ဆတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကြောင့် ငါးလသားလေးသေဆုံးသွားပါပြီ… ဖြစ်စဉ် – ယနေ့မနက်(10:00)နာရီခန့်တွင် ပြည်မြို့ ရွှေတံခါးရပ်ကွက်မှ ငါးလသားအရွယ် မောင်သူရိန်ထွန်းမှ အသားများအေးစက်ပြီးကလေးငယ်မှငြီးနေသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူနှင့် အဒေါ်ဖြစ်သူမှ ပြည်ဆေးရုံကြီးပြင်ပလူနာဌာနတွင် သွားရောက်ပြသရာ တာဝန်ကျဆရာဝန်မှ ကလေးမှာအဖျားမရှိဘူး ကိုယ်လည်းမပူဘူးပြော၍ပြန်လွှတ်လိုက်သည်… ထိုသို့ပြန်လာရာကလေးမှမသက်သာသဖြင့် ၁၃ […]